UNICEF Somalia - Media centre - Adduunku Waa in uu Hadda Qaadaa Tallaabo Lagu Badbaadinaya Nolosha Dadka Soomaaliya, Hay’adaha Qm Ayaa Digniintaas Bixiyey
Adduunku Waa in uu Hadda Qaadaa Tallaabo Lagu Badbaadinaya Nolosha Dadka Soomaaliya, Hay’adaha Qm Ayaa Digniintaas Bixiyey
MUQDISHO, 17 Febraayo 2017 – Iyada oo abaar ba’an ay faro kulul ku hayso Soomaaliya, ayaa UNICEF iyo Barnaamijka Cuntada Adduunka ee Qaramada Midoobey (WFP) ay ka digayaan in haddii si weyn oo degdeg ah kor loogu qaado gargaarka bani’aadamnimada oo keliya ay dalka gacan ka siin karto in uu ka badbaado masiibo kale oo ku habsata.
Abaartii gobollada waqooyi ay la dhibaatoonayeen sanadkii la soo dhaafey ayaa ku baahdey guud ahaan Soomaaliya, taas oo halis gelisey dadka oo horeyba u jilicsanaa oo ay dhibaato ku haysey colaad socotey tobanaan sano. Ku dhowaad kalabar dadka dalka ku nool, ama 6.2 milyan qof, ayaa ay haqab-beel la’aan cunto oo ba’ani ay haysaa ama u baahan taageero maciishadeed. Waxaa la filayaa in 944,000 carruur ah ay haleeli doonto nafaqo-xumo ba’an sanadkan gudihiisa, kuwaas oo ay ka mid yihiin 185,000 oo ay nafaqo-xumo aad ba’an ay soo wajahi doonto oo una baahan doona taageero naf-badbaadin ah. Waxaa ay aad ugu dhowdahay in tirada la qiyaasey in ay noqon doonaan carruurta nafaqo-xumadu ay hayso ay kordhi doonto 50 boqolkiiba oo ay noqon doonto 270,000 bilaha soo socda.
Wakiillada UNICEF iyo WFP ayaa toddobaadkan booqanayey qaar ka mid ah degaannada ay dhibaatada ugu weyn soo gaadhey ee gobolka waqooyiga dalka ku yaalla ee Puntand, halkaas oo labada hay’adood ay ka bixinayaan gargaarka sida weyn loogu baahan yahay.
“Soomaali aad u tiro badan ayaa ay ka dhammaadeen kheyraadkii ay heli kareen waxaana ay hadda ku nool yihiin wax aan ka badneyn afkooda,” ayaa uu yiri Steven Lauwerier, oo ah Wakiilka UNICEF Somalia. “Waxaan haysannaa fursad yar oo aan kaga hortegi karno masiibada soo wajahan oo aan ku badbaadin karno nolosha carruurta waxaana naga go’an in aan la shaqeyno dhammaan la-hawlgalayaasha iyo daneeyeyaasha kala duwan si aan u guuleysano.”
Abaarta jirta iyo dhibaatooyin kale ayaa yareeyey ama dhammeeyey kheyraadkii ay bulshadu ku tiirsanaan lahayd. Tuulooyin dhan ayaa ay ka baaba’een dalagyadoodii ama ay ka dhammaadeen xoolahoodii iyaga oo u jeeda. Qiimaha biyaha iyo cuntada laga soo saaro gudaha dalka ayaa aad kor ugu kacay, kumanaan qof ayaan meelihii ay degganaayeen ka guurey si ay u raadsadaan cunto iyo biyo. Abaarta ayaa sidoo kale waxaa ay sababtey in ay kordhaan cudurrada biyaha ka dhasha iyada oo in ka badan 4,000 xaaladood oo Shuban-biyood Ba’an/Daacuun ah la arkey sanadkan gudihiisa.
“Gargaarka bani’aadamnimada ayaa muddadii sanadka ahayd ee la soo dhaafey badbaadiyey nolosha dadka abaartu saameyey ee ku nool waqooyiga dalka, laakiin maaddaama ay dhibaatadu sii baaheyso ma haysanno waqti la lumiyo,” ayaa uu yiri Laurent Bukera oo ah Agaasimaha Dalka ee hay’adda WFP. “Annaga oo kaashaneyna UNICEF iyo la-hawlgalayaal kale, ayaan u soconnaa sida ugu dhaqso badan ee suuragalka ah si aan dad kale oo aad u badan ula gaarno taageero nolol-badbaadin ah annaga oo adeegsaneyna qaab kasta oo suuragal ah, oo uu ka mid yahay taageero lacageed oo toos loo siiyo dadka, taageero nafaqo oo khaas ah iyo in aan diyaarado ku qaadno gargaarka.”
Hay’adaha ayaa xusey in gaarsiinta gargaarka bani’aadamnimadu uu weli aad uxaddidan yahay degaannada ay abaartu saameysey ee koonfurta, laakiin in WFP iyo UNICEF ay ay sii xoojinayaan dadaalladooda wadajirka ah ee ay kor ugu qaadayaan hawsha ay ka wadaan degaannada la gaari karo, halkaas oo malaayin ay noloshoodu halisku jirto. Hay’adaha ayaa wadajir wax uga qabanaya abaarta iyada oo waraaqo lagu beddesho cunto siinaya boqollaal kun oo ku nool guud ahaan degaannada ay dhibaatadu saameysey ee ka tirsan Soomaaliya iyo sidoo kale iyaga oo buxinaya gargaar dhinaca nafaqada ah. Iyada oo kheyraad kale la soo ururinayo, ayaa waxqabadka wadajirka ah lagu sii ballaarin doonaa gobollada ugu nugul.
Maaliyadaha ayaa waxaa si deeqsinimo leh u bixinayey deeq-bixiyeyaasha caalamiga ah ee ka socda Yurub, Aasiya, Waqooyiga Ameerika iyo nidaamka QM ee adeegyada nolol-badbaadinta ee nafaqada, haqab-beelka cuntada, caafimaadka, waxbarashada, biyaha iyo fayadhowrka.
Iyada oo baahiyuhu sii badanayaan, ayaa UNICEF iyo WFP waxaa ay wadajir ahaan ugu baahan yihiin lacag ka badan US$450 milyan oo doolar si ay u bixiyaan gargaarka degdegga ah ee loo baahan yahay bilaha soo socda.
UNICEF waxaa ay Soomaaliya ka shaqeyneysey tan iyo 1972dii markaas oo xafiiskeedii ugu horreeyey ay ka furatey Muqdisho. Maanta UNICEF waxaa ay xafiisyo badan ku leedahay guud ahaan dalka, kuwaas oo ka furan meelo ay ka mid yihiin Muqdisho, Baydhabo, Garoowe iyo Hargeysa. Annaga oo kaashaneyna in ka badna 100 NGO-yo caalami ah iyo kuwo maxalli ah iyo ururrada ku dhisan bulshada, ayaa UNICEF waxaa ay bixisaa adeegyo dhinaycada Caafimaadka, Nafaqada, Biyaha, Fayadhowrka iyo Nadaafadda, Waxbarshada iyo Ilaalinta Carruurta isugu jira, waxaana ay sidoo kale wax ka qabataa xaaladaha degdegga ah, waxaana ay bixisaa taageero dhinaca nabad-dhisidda iyo horumarinta ah. Macluumaad dheeri ah ka eeg www.unicef.org/somalia
Ku saabsan WFP
WFP waa hay’adda bani’aadamnimada ee adduunka ugu weyn ee la dagaalanta baahida guud ahaan dunida, iyada oo gargaar cunto siisa xaaladaha degdegga ah iyada oo bulshooyinka kala shaqeysa sidii ay u sii wanaajin lahaayeen nafaqada ayna u xoojin lahaayeen adkeysigooda. Sanad kasta, WFP waxaa ay gargaartaa ilaa 80 milyan oo qof oo ku kala nool 80 dal. WFP waxaa ay hawlgalkeedii ugu horreey ka bilowdey Soomaaliya sanadkii 1967dii, waxaana ay sanadkaan higsaneysaa in ay caawiso 4.2 milyan oo qof oo ku nool dalka. Marka laga soo tago gargaarka degdegga ah ee cuntada, Barnaamijyada WFP waxaa ay sii wanaajiyaan sida Soomaalida nugul ay ugu adkeysan lahaayeen dhibaatooyinka dhaca sida abaaraha iyo fatahaadaha/daadadka. Hawshaan waxaa ka mid ah in la dhiso meelo biyaha lagu keydiyo iyo waddooyin, iyo xoojinta qaabab ay ku badbaadaan sida barnaamijyada nafaqada iyo kuwa quudinta iskuullada iyo sidoo kale in ay la shaqeyso si ay beeraleyda yaryar ugu xirto suuqyada.
Macluumaad dheer ah, fadlan kala soo xiriir: